एबीसीले अन्तरराष्ट्रिय गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्छ - आर्थिक पाटी
एबीसीले अन्तरराष्ट्रिय गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्छ
वरिष्ठ विक्री अधिकृत, एबीसी ट्रान्सफर्मर प्रालि
विद्युतीय उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिने ट्रान्सफर्मर निर्माणमा छुट्टै पहिचान बनाएको एबीसी ट्रान्सफर्मर प्रालिले २५ वर्ष पुगेको अवसरमा आफ्नो रजत जयन्ती मनाइरहेको छ । १५ एमभीएदेखि ५० हजार एमभीए क्षमतासम्मका ट्रान्सफर्मरको उत्पादन गरेर व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहेको यस कम्पनीले नेपाली बजारमा १५ हजार एमभीए क्षमतासम्मको ट्रान्सफर्मर विक्री गरिसकेको छ । भारतको नोयडामा उद्योग स्थापना गरेको कम्पनीले १४ वटाभन्दा बढी देशमा ट्रान्सफर्मरको निर्यात गर्छ । नेपालमा ट्रान्सफर्मरको वर्तमान अवस्था, यस क्षेत्रका विभिन्न समस्या तथा चुनौती, कम्पनीको उत्पादनको विशेषता र आगामी योजनाका विषयमा कम्पनीका वरिष्ठ विक्री अधिकृत प्रतीक ढकालसँग आर्थिक पाटीका मदन लामिछानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालमा ट्रान्सफर्मरको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि ट्रान्सफर्मरको व्यवसाय फस्टाउँदै गइरहेको छ । सरकारले विद्युतको सप्लाई बढाइरहेकाले व्यवसायीहरू पनि उत्साहित भएका छन् । पहिलाको जस्तो विद्युतकै कारण व्यवसाय डुब्ने अवस्था अहिले छैन । देशमा नयाँनयाँ उद्योगी, व्यवसायीहरू थपिने क्रम बढेको छ । उद्योग, व्यवसायहरू बढ्दै जाँदा ट्रान्सफर्मरको विक्री पनि बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा स्वदेशी र आयातित गरी करिब आधा दर्जन ट्रान्सफर्मर कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरू विक्री गरिरहेका छन् । नेपालमा विक्री हुने प्रमुख तीन ब्राण्डमा एबीसी ट्रान्सफर्मर पनि पर्छ ।
नेपालमा भएको विद्युतीकरणको करिब १५ प्रतिशत वितरणमा मात्रै ट्रान्सफर्मर लागेको छ । अझै ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुन बाँकी नै छ । तराईका ८्१० वटा जिल्लामा उद्योगहरू धेरै खुलेकाले ट्रान्सफर्मरको प्रयोग पनि धेरै भएको छ । तर, बाँकी जिल्लामा उद्योगधन्दा विस्तार हुने क्रममा छ । त्यो बजार हाम्रो लागि खाली नै छ । ती क्षेत्रमा आफ्नो बजार विस्तार गर्न हामी लागि परिरहेका छौं । हामीहरूले आफ्नो बजार विस्तारका लागि प्रोडक्टको गुणस्तर तथा विक्रीपछिको सेवालाई पनि बढाउँदै लगिरहेका छौं । नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारहरूले नयाँनयाँ प्रशासनिक भवनहरू निर्माण गरिरहेका छन् । त्यस्तै, शक्ति विकेन्द्रीकरणसँगै प्रदेशहरूमा पनि नयाँ उद्योगहरू खुल्ने क्रम बढेको छ । यसले गर्दा पनि ट्रान्सफर्मरको बजार फस्टाउँदै गइरहेको छ ।
एबीसी ट्रान्सफर्मरको विशेषता के हो ?
कम्पनीले शुरूआतदेखि नै परिमाणभन्दा गुणस्तरलाई जोड दिएर उत्पादन गर्दै आएको छ । हामीले ट्रान्सफर्मरभित्र प्रयोग गर्ने कपरमा लाइफ टाइम ग्यारेण्टी दिन्छौं । नेपाली बजारमा केही समयपहिले कपरको ठाउँमा आल्मुनियम राखेका ट्रान्सफर्मर आयात भई वितरण गरियो । त्यसैका लागि हामीले एबीसी ट्रान्सफर्मरमा प्रयोग गरिने कपरको लाइफ टाइम वारेण्टी दिएका हौं । हामीले विश्वमै गनिएका कम्पनीहरूबाट कोर आयात गरी प्रयोग गर्छौं । त्यस्तै, त्यसमा प्रयोग हुने आयल लेटेस्ट स्ट्याण्डर्ड्स आईएस ३३५ को प्रयोग गर्छौं । हामीले ट्रान्सफर्मरको बाहिरी लिकेज प्रुफ जाँच गर्नका लागि २्३ वटा टेस्ट गरेर त्यसलाई उद्योगमा पुनː टेस्ट गरेर मात्रै बजारमा पठाउँछौं । हामीले विश्वकै उत्कृष्ट कम्पनीबाट कच्चा पदार्थ खरीद गरी उत्पादन गर्ने भएकाले पनि एबीसी ट्रान्सफर्मर विश्वकै उत्कृष्ट ट्रान्सफर्मर बन्न सफल भएको हो । २५औं वर्षको रजत महोत्सव मनाइरहँदा यस कम्पनीले १४ वटाभन्दा बढी देशमा निर्यात गर्न सफल भइसकेको छ ।
एबीसी ट्रान्सफर्मर नेपाल सरकारअन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणले परीक्षण गरेपछि मात्रै कम्पनीले बजारमा पठाउने गर्छ । कम्पनीले यसलाई उचित बजार मूल्यमा विक्री गरिरहेको छ । हामीले विक्री गरेका ट्रान्सफर्मरको प्रत्येक वर्ष त्यसको चेकअप गर्ने गर्छौं । जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू पनि ढुक्क छन् । एबीसी ट्रान्सफर्मर किन्ने उद्योगीहरूले यसको गुणस्तरका बारेमा बजारमा राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहेकाले हाम्रो बजार तीव्र गतिले बढ्न सकेको हो ।
एबीसी ट्रान्सफर्मर कस्ताकस्ता प्रकारका छन् ? हाल नेपालमा विक्री भइरहेका ट्रान्सफर्मरका बारेमा बताइदिनुस् न ?
कम्पनीले हाल विभिन्न पाँच प्रकारका एबीसी ट्रान्सफर्मरको उत्पादन गरिरहेको छ । बजार क्षेत्र, व्यावसायिक भवन तथा साना उद्योगहरूमा डिष्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा अहिले सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको डिष्ट्रिब्यूसन ट्रान्सफर्मर हो । ठूलो क्षमताका लागि पावर ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिन्छ । यस्ता ट्रान्सफर्मरको प्रयोग हाइड्रोपावर, सिमेण्ट, फलामे छडलगायत ठूला उद्योगमा गरिन्छ । सामान्यतया ५ एमभीए क्षमताभन्दा माथिको ट्रान्सफर्मरलाई पावर ट्रान्सफर्मर भनिन्छ । अर्को ड्राई टाइप ट्रान्सफर्मरमा आयल राखिएको हँुदैन । सामान्यतया अन्य ट्रान्सफर्मरहरूमा आयल राखिएको हुन्छ । यो ट्रान्सफर्मरको मूल्य अलि बढी पर्ने भएकाले नेपालमा यसको प्रयोग एकदमै कम भएको छ । एमरफस्ट ट्रान्सफर्मरमा सञ्चालन खर्च एकदमै कम लाग्छ । साथै, यसले आफैं पनि बिजुलीको खपत कम गर्छ । स्पेशल पर्पोज ट्रान्सफर्मर ग्राहकहरूको आवश्यकताका आधारमा डिजाइन गरी बनाइन्छ । जस्तो, सोलार, इन्भर्टर, फर्नेश, कन्भर्टर ड्युटी ट्रान्सफर्मरमध्ये ग्राहकले जस्तो प्रकारको ट्रान्सफर्मर माग गर्छन्, त्यसै आधारमा बनाएर उपलब्ध गराइन्छ ।
एबीसी ट्रान्सफर्मर प्रालिले १५ एमभीएदेखि ५० हजार एमभीए क्षमतासम्मका ट्रान्सफर्मरको उत्पादन गर्छ । हामीले नेपाली बजारमा १५ हजार एमभीए क्षमतासम्मको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गरेर विक्री गरिसकेका छौं ।
हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा एबीसी ट्रान्सफर्मर कत्तिको खपत भइरहेको छ ?
हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा प्रयोग गरिने इलेक्ट्रो मेकानिकल ट्रान्सफर्मर धेरैजसो चीनबाट आयात भइरहेको छ । नेपालमा नै यस्ता ठूलो क्षमताका ट्रान्सफर्मर उपलब्ध छन् भन्ने जानकारी नभएर पनि चीनबाट आयात भएको हो । अर्को कुरा, चिनियाँ ठेकेदारले धेरै हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरूको ठेक्का लिएकाले उनीहरूले आफूले लिएको परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सबै इक्विपमेण्टहरू चीनबाटै ल्याउने गर्दछन् । पछिल्लो समय हामीले एबीसी ट्रान्सफर्मरका बारेमा जानकारी दिँदै ५० हजार एमभीएसम्मको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गरिरहेको जानककारी दिइरहेका छौं । साथै, हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका मानिसहरूलाई बेलाबेलामा भारतमा रहेको कम्पनीको उद्योगमा भ्रमण पनि गराइरहेका छौं । यसपछि केही प्रोजेक्टहरूमा हामीले पावर ट्रान्सफर्मर विक्री पनि गरिसकेका छौं ।
एबीसी ट्रान्सफर्मरले नेपालमै ठूलो क्षमताको ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। यसबाट व्यवसायीहरूलाई बाहिरबाट झन्झट बेहोरेर ठूलो क्षमताको ट्रान्सफर्मर आयात गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ ।
कम्पनीले ट्रान्सफर्मरको गुणस्तर कायम गर्न के के पक्रिया गर्छ ?
नेपालमा एबीसी ट्रान्सफर्मरको विक्री विगत १० वर्षदेखि भइरहेको छ । पछिल्लो तीन वर्षयता हामी आक्रामक बजार विस्तारमा लागेका छौं । हामीले गुणस्तर र विक्रीपछिको सेवामा उपभोक्ताको मन जित्न सकेकाले छोटो समयमा नै नेपालमा विक्री हुने प्रमुख तीन ब्राण्डहरूमा एबीसी पर्न सफल भएको हो । कम्पनीले ट्रान्सफर्मरको ल्यावमा राम्रोसँग परीक्षण गरेपछि मात्रै बजारमा ल्याउने गर्छ । नेपाल सरकारको ल्यावमा पनि परीक्षण गरेपछि मात्रै यसको विक्री गरिन्छ । ट्रान्सफर्मरको विक्री बढाउन गुणस्तर, क्षमता, कार्यदक्षता र विक्रीपछिको सेवा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो कम्पनीले यी सबै सुविधाहरू दिएर उपभोक्ताको मन जित्दै आएको छ ।
ट्रान्सफर्मर व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?
ट्रान्सफर्मरको बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । ग्राहकहरू पहिलेभन्दा धेरै सचेत भइसकेका छन् । ट्रान्सफर्मर किन्दा कसैले पनि नबुझेर किन्दैनन् । ग्राहकहरूले बजारमा उपलब्ध सबै ब्राण्डको गुणस्तर, विक्रीपछिको सेवा, मूल्य आदिका बारेमा बुझेर मात्रै खरीद गर्ने गर्छन् ।
ट्रान्सफर्मर आयातका लागि सरकारी नीति कत्तिको सहयोगी छ ?
सरकारी नीतिले ट्रान्सफर्मर आयातमा कुनै समस्या पारेको छैन । सरकारले ट्रान्सफर्मर आयातमा भन्सार शुल्क अलि बढी लिइरहेको छ । यसमा सरकारले केही सहुलियत दियो भने अरू कुरामा कुनै समस्या छैन ।
नेपालमा नयाँ ट्रान्सफर्मर उद्योग खोल्ने सम्भावना छ कि छैन ?
एबीसी ट्रान्सफर्मरले तत्काल नेपालमा उद्योग खोल्ने सोच बनाएको छैन । तर पनि ट्रान्सफर्मर उद्योग खोल्नेबारेमा पहिलो चरणको प्रारम्भिक अध्ययन भने गरेका छौं । नेपालबाट उत्पादन शुरू गर्दा मूल्य बढने देखिन्छ किनभने भारतमा हामीले उत्पादन गरि रहेको ठाउँकोभन्दा यहाँको कामदारको ज्याला बढी छ । हामीले यहाँ उत्पादन गर्दा अहिले बेचिरहेको मूल्य र गुणस्तरमा ट्रान्सफर्मर दिने चुनौती छ ।
केही समयअगाडिसम्म नेपालमा भइरहने बन्द, हडताल र लोडसेडिङले गर्दा यहाँ उद्योग खोल्न त्यति उपयुक्त देखिएको थिएन । अहिलेको राजनीतिक स्थिरतापछि यहाँ औद्योगिक वातावरण बन्दै गइरहेको देखिन्छ । हामी यसको अध्ययनकै नै चरणमा छौं ।
कम्पनीले विक्रीपछिको सेवा कसरी दिइरहेको छ ?
हामीहरूले उपभोक्तालाई सजिलो होस् भनेर सर्भिस सेण्टरहरू थप्दै लगेका छौं । ट्रान्सफर्मरमा कमै समस्या आउने गर्छ । ट्रान्सफर्मरका कारणले त्यसको प्रयोगकर्तालाई सानो पनि नोक्सानी नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । हामीले कुनै ठाँउबाट गुनासो वा समस्या आयो भने तुरुन्तै सेवा दिन्छौं । हामीले समयसमयमा गएर ट्रान्सफर्मरमा केही समस्या आएको छ कि छैन भनेर फलोअप गरिरहेका हुन्छौं । यसले गर्दा उद्योगीहरू एबीसी ट्रान्सफर्मरकको सेवादेखि एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
हामीले नेपाली बजारमा ४ हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर विक्री गरिसकेका छौं । प्रत्येक वर्ष हाम्रो विक्री २० प्रतिशतले बढिरहेको छ । आउने वर्षहरूमा विक्री अझै बढ्ने अवस्था देखिएको छ । एबीसी ट्रान्सफर्मरको विक्री उच्च गतिले बढेपछि हामीले २ वर्षको वारेण्टीलाई बढाएर ५ वर्ष गराइसकेका छौं । हामीले ट्रान्सफर्मरमा समस्या खासै आएको नपाएपछि वारेण्टी अवधि बढाएका हौं । यसले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अझ ढुक्क बनाएको छ ।
एबीसी ट्रान्सफर्मरको प्रयोग कुनकुन क्षेत्रमा बढी भएको छ ?
हाम्रा ट्रान्सफर्मरहरू वितरण, उद्योग, हाइड्रोपावर, ठूला भवन, सिँचाइँ, अस्पताललगायतका ठाउँहरूमा जडान भएका छन् । नेपालमा हाम्रो कम्पनीका ४ हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मरका सन्तुष्ट ग्राहकहरू छन् । म सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरू जसलाई ट्रान्सफर्मरको आवश्यकता छ, उहाँहरूलाई हाम्रो अफिसमा आएर ट्रान्सफर्मरकका बारेमा बुझ्न आग्रह गर्छु । सेण्टर वर्कसप हेटौंडामा चेकअप भएर बजारमा जाने भएकाले यसलाई देशभर जुनसुकै ठाउँमा पनि बिनाकुनै झन्झट जडान गर्न सकिन्छ ।
एबीसी ट्रान्सफर्मरले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैन । आगामी दिनमा पनि ट्रान्सफर्मर उत्पादनमा आउने अत्याधुनिक प्रविधिहरूलाई आत्मसात् गर्दै त्यसैअनुसारका उत्पादनहरू दिएर ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउने उद्देश्य कम्पनीको रहेको छ । हाल पनि कम्पनीले उत्पादन गर्ने हरेक उत्पादनको ल्याव टेस्ट पनि उच्चस्तरीय प्रविधिबाटै गराइरहेका छौं । कम्पनीले ट्रान्सफर्मरभित्र प्रयोग गरिने कपर, आयल, कोरहरू आईएसओप्राप्त कम्पनीहरूको मात्रै प्रयोग गर्छ ।
विद्युत् निर्यातले हाल बेहोरिरहेको व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउछ